बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्नु नहुने काम के हो ? थाहा पाउनुहोसGandaki Press
बिहान उठ्ने बित्तिकै गर्नु नहुने काम के हो ? थाहा पाउनुहोस
साउन २१, २०७८ ०६:१८ मा प्रकाशित
बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने झै बिहान गरिने क्रियाकलाप अनुसार मानिसको दैनिकी सहज र असहज भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसैले आजैबाट तपाईंले आफूलाई सहजताका लागि बहसमा राख्नुहोस । तपाईले अपनाउने यो सतर्कताले तपाईलाई नै फाइदा पुग्ने छ ।
नियमित हिँड्नु स्वस्थ जीवनशैलीको महत्वपूर्ण पाटो हो । बिहानको हिँडाइले त स्वास्थ्यलाई कैयौँ फाइदा पुर्‍याइरहेको हुन्छ । बिहान हिँड्दा दिनभर शरीर फुर्तिलो हुने मात्र नभई मोटोपन, मुटुरो’गजस्ता कैयौँ स’मस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
ध्यान दिनुहोस बिहान उठ्ने बित्तिकै यी कुरा गर्नु हुँदैन
१.बिहान ढिलासम्‍म नसुत्नुस्। सूर्य उदाउनु अगाडि उठेको राम्रो ।
२. बिहानै मोबाइलमा कुरा नगर्नुहोस । बादविवाद गर्ने काम नगर्नुस्।
३. बिहान बिहान कसैमाथि रिस नदेखाउनुस्। कसैले काम बिगारेको छ भने नम्र भएररसकारात्मक भएर सम्झाउने गर्नुस्।
४. बिहान बिछ्यौनामै पल्टेर टीभी हेर्ने बानी आजैबाट छुटाउनुहोस ।
५. बिहान उठ्ने बित्तिकै ऐना नहेर्नु होला। धेरैको प्राय यही बानी छ। यसले तपाइको शरीरमा धेरै मात्रामा नेगेटिभ ऊर्जा, रोगको सम्भावना र भयको सम्भावना बढी शरीरमा उत्पन्‍न गराउँछ।
६. बिहान उठ्ने बित्तिकै घरको छत, बार्दलीमा गएर आफ्नो कमलो छाया वा अरु व्‍यक्तिको पनि हेर्दै नहेर्नुस्। छायाँ हेर्नाले पनि ऊर्जा नेगेटिभ बनाइदिन्छ तपाइको शरीरमा।
७.जनावरहरुको तस्बिररफोटो रुममा राख्नु भएको छ भने कृपया हेरेर बस्ने काम नगर्नुस्। शास्त्रीय ढंगले जनावरहरुको तस्बिर हेर्न उचित मानिएको छैन बिहान।
८. दूध हालेको चिया खाँदै नखानुस्। यसले ग्‍यास्ट्रिक, ग्यास्ट्रिकले अल्सर अलसरले क्‍यान्सर हुन सक्छ।
९. मसलेदार खाना नखानुस्। खैनी चुरोट र चिया खाँदै हुनुहुन्छ भने यी कामहरु प्रयोगमा ल्‍याउँदै नल्याउनुस्।
१०.बिहान कालो चिया पिउनुस् वा तुलसीको पातको चिया। चिया चिनीको सट्टामा सख्खर प्रयोग गर्नुस्। नभए नगर्दा नि उत्तम हुन्छ।